ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस
ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस
on: १० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०७:५० In: समाचारTags: ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिसNo Comments
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलसजाय भोगिरहेका नेकपाका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न सिफारिस गरिएको छ । डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका नेता ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो । ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कैद मिनाहाको सिफारिस गरिएको छ । उनीसँगै आठ सय बढी कैदीको कैद मिनाहाको सफाारिस भएको छ । ढुंगेलको कैद मिनाहाका लागि गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमार्फत सिफारिस मागेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उनीलगायत प्रक्रिया पुगेका कैदीको कैद मिनाहाको सिफारिस कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा विभागले कारागार नियावलीअनुसार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो ।विभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीले आठ सय बढी कैदीको कैद मिनाहाका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए । ‘सबैको नाम याद छैन, काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट आएको नामावली रुजु गरी प्रक्रिया पुगेको हकमा सिफारिस गरिएको हो’, मैनालीले भने ।
सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको ढुंगेललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत कात्तिक १४ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको थियो । ढुंगेल द्वन्द्वकालमै साढे सात वर्ष जेल बसेका कारण कात्तिकमा पक्राउ परेपछि कैद भुक्तानका लागि उनको प्रक्रिया पुगेको कारण देखाइएको छ । गत वैशाखमै आठ वर्ष पुगिसकाले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेकपछि कैदीको असल चालचलनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले उनको नामसहित अन्य कैदीको नामसमेत माफी मिनाहाका लागि विभागमा पठाएको थियो । २०६१ मा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेको थियो ।
नागरिकका अनुसार, सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालतबाट सफाइ पाए पनि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा आममाफीविरुद्ध रिट परेको थियो । सोही रिटमा उनलाई माफी मिनाहा नगर्न सवैधानिक इजलासले आदेश दिएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेता ढुंगेललाई कारागारामै गएर भेटी जेलमुक्त गराउने आश्वासन दिएका थिए।
Tags: ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस
नीति तथा कार्यक्रममा नीतिहरु छन्, कार्यक्रम छैनन्– सभापति देउवा
सचिबले मन्त्रीका स्कीयलाई नै प्रहरी लगाएर थुनाए !
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०७:५०